सम्मेलनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका नारायण जिसी, क्षेत्रीय समितिका अध्यक्ष राम प्रसाद बस्याल, सदस्य खिमानन्द न्यौँपाने, महिला विभागबाट गोमा थापाले पनि शुभकामना दिनु भएको थियो । उद्घाटन शत्रको अध्यक्षता विष्णु पोखरेल र सञ्चालन राजु अधिकारीले गर्नु भएको थियो । लक्ष्मी प्रसाद ज्ञवालीले स्वागत गर्नु भएको थियो ।
सम्मेलनले लक्ष्मी प्रसाद ज्ञावलीको अध्यक्षतामा नया“ समिति चयन गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा किशन सिंह परियार, सचिवमा राजु अधिकारी, सहसचिवमा अनिल आले र कोषाध्यक्षमा भवानी प्रसाद शर्मा रहनु भएको छ । त्यस्तै सदस्यमा विष्णु प्रसाद पोखरेल, गोमा थापा, जङ्गबहादुर राना, मोहन खनाल, राम बहादुर थापा र माधव सापकोटा रहनु भएको छ । वैकल्पिक सदस्यमा बुद्ध बहादुर, रोहित राना र हुमनाथ बस्याल रहनु भएको छ । सम्मेलनले सल्लाहकारमा दुर्गा प्रसाद न्यौपाने, तिल बहादुर थापा, चित्र बहादुर आचार्यलाई चयन गरेको छ ।
सम्मेलनको अवसरमा पम्फा न्यौपानेको अध्यक्षतामा महिला नगर विभाग गठन गरिएको छ, जसको सचिवमा सविता शर्मा, कोषाध्यक्षमा गोमा थापा र सदस्यहरुमा गङ्गा ज्ञवाली, गीता खनाल, कल्पना शर्मा, सीता पन्थ र निरा आले रहनु भएको छ । त्यस्तै, मिनुसिंह ठकुरीको संयोजकत्वमा रक्तिम नगर विभाग पनि गठन गरिएको छ, जसको सदस्यहरुमा सीता थापा, मनिषा थापा, आ“चल थापा, लक्षु आले राना, अमन थापा, अमृत सिंजाली र गोमा थापा रहेका छन् । समितिको घोषणा राम प्रसाद बस्यालले गर्नु भएको थियो ।
समितिलाई अतिथिहरुका अतिरिक्त केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रुक बहादुर केसी, अखिल नेपाल युवक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य विष्णु शर्मा, महिला विभाग नगर अध्यक्ष पम्फा न्यौपाने लगायतले बधाइ दिनु भएको थियो । घोषणा सभाको अध्यक्षता खिमानन्द न्यौँपानेले र सञ्चालन राजु अधिकारीले तथा स्वागत विष्णु प्रसाद पोखरेल र कलाकारहरुले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा रक्तिमका कलाकारहरुले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
जुन १० का दिन पूर्वी भारत क्षेत्रीय समिति अन्तर्गत भूवनेश्वर नगर समितिको बाह«ौँ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन समाजका महासचिव खगेश्वर शर्माले गर्नु भएको थियो । सम्मेलनको सञ्चालन केशव क्षेत्री र अध्यक्षता रेकम जिसीले गर्नुभएको थियो । विजय कुमार लामाले स्वागत गर्नु भएको थियो ।
सम्मेलनले रेकम जिसीको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय भूवनेश्वर नगर समिति चयन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा विजय कुमार लामा, सचिवमा केशव क्षेत्री, सहसचिवमा मीन थापा र कोषाध्यक्षमा पशुराम लहयो मगर रहनु भएको छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा कौशल्य परियार, वशन्ती क्षेत्री, शशिकला जिसी, सीता थापा, दुर्ग बहादुर सुनार, रमेश परियार, रामु क्षेत्री र गिरीराज परियार रहनु भएको छ । वैकल्पिक सदस्यमा अरुण लामा र राजु सुनुवार रहनु भएको छ । सम्मेलनले सल्लाहकारमा थमन जिसी, डिग्जा प्रसाद सुवेदी, धन बहादुर प्रधान, दुर्ग बहादुर माझी र कृष्ण गौतमलाई चयन गरेको छ । समितिको घोषणा क्षेत्रीय समितिका सचिव हरि प्रसाद शर्माले गर्नु भएको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य गिरीराज परियार, परिषद सदस्य सम्मर माझी, केन्द्रीय सदस्य तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष हेम कुमार थापा, विद्यार्थी क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोज परियार, क्षेत्रीय सचिव हरि प्रसाद शर्मा, समाजसेवी दिग्जा प्रसाद सुवेदी, विजय कुमार लामा, क्षेत्रीय सदस्य विष्णु श्रीनेत, कटक नगर अध्यक्ष शिव कुमार सुतार र महिला विमिना थापा लगायतले बधाइ दिनु भएको थियो ।
लुधियाना सिटी–पंजाव ः
जुन ९ र १० का दिन सुदूर पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समिति अन्तर्गत लुधियाना सिटी नगर समितिको चौधौँ नगर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । प्रमुख अतिथि केन्द्रीय उपाध्यक्ष कपिल खनालले सम्मेलनको उद्घाटन गर्नु भएको थियो ।
विशिष्ट अतिथि केन्द्रीय उपाध्यक्ष हिरासिंह चन्द, क्षेत्रीय सदस्य कैलाश खडका, महिला क्षेत्रीय सदस्य गीता चन्द, विद्यार्थी क्षेत्रीय समितिका नविन चन्द लगायतले शुभकामना दिनु भएको थियो । उदयसिंह चन्दको अध्यक्षतामा तथा रामचन्द्र पौडयालको सञ्चालनबाट अगाडि बढेको उदघाटन समारोहमा खुम बहादुर थापाले स्वागत गर्नु भएको थियो ।
सम्मेलनले उदयसिंह चन्दको अध्यक्षतामा नयाँ समिति चयन गरेको छ, जसमा उपाध्यक्ष खुम बहादुर थापा, सचिव पशुपति पोखरेल, सहसचिव चन्द्र साउद र कोषाध्यक्ष रामचन्द्र पौडयाल रहनु भएको छ । सदस्यहरुमा नन्दराज भण्डारी, दोर्ण पोखरेल, कैलाश खडका, वल बहादुर केसी, मान बहादुर थापा, नारायण पोखरेल, दिलीप थापा, हिक्मत परियार, हुम बहादुर राना र दिपा चन्द रहनु भएको छ । वैकल्पिक सदस्यहरुमा चक्र बहादुर चन्द, रवि शर्मा, महेन्द्र बोगटी, कृष्ण खनाल र गणेश विक रहनु भएको छ । सम्मेलनले सल्लाहकारमा गीता चन्द, शङ्कर परियार र राम प्रसाद बेलवासेलाई चयन गरेको छ । समितिको घोषणा केन्द्रीय सदस्य तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रेम सापकोटाले गर्नु भएको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य दिनेश खडका, सल्लाहकार तिलक पौडेल, शिवलाल लामिछाने, खेमराज पोखरेल, मान बहादुर केसी, बुद्विराम आचार्य, महिला क्षेत्रीय सदस्य गीता चन्द, विद्यार्थी क्षेत्रीय समितिका अङ्कित पोखरेल, समता क्षेत्रीय विभागका राम बहादुर ताम्राकार, सङ्गरुरका राजु खनाल, चण्डीगढका शमशेर केसी, लुधियाना फोकलप्वाइन्टका जनक रिजाल, गोविन्दगढका तारा जिसी लगायतले पनि बधाइ दिनु भएको थियो ।
घोषणा सभाको अध्यक्षता द्रोण पोखरेल र सञ्चालन रामचन्द्र पौडेलले गर्नु भएको थियो । उदयसिंह चन्द र कलाकारहरुले स्वागत गर्नु भएको थियो ।
सोही मितिमा मध्य पश्चिम भारत क्षेत्रीय समिति अन्तर्गत रायगढ नगर समितिको आठौँ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन केन्द्रीय सचिव प्रेम पौडेलले गर्नु भएको थियो ।
श्याम त्रामुको अध्यक्षता तथा जितमान सिँजालीको सञ्चालनबाट अगाडि बढेको उद्घाटन समारोहमा लिलाम्बर सिंजालीले स्वागत गर्नु भएको थियो । केन्द्रीय सदस्य गोविन्द बहादुर थापा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष टङ्क कुँवर र अनन्त राहाडीले शुभकामना दिनु भएको थियो ।
सम्मेलनले जितमान सिंजालीको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय रायगढ नगर समिति चयन गरेको छ । समितिमा उपाध्यक्ष रण बहादुर बोगटी, सचिव केशव गाहा, सहसचिव शेर बहादुर थापा र कोषाध्यक्ष शान्त बहादुर थापा रहनु भएको छ । त्यस्तै सदस्यमा श्याम त्रामु, दिनेश वाग्ले, गोपाल थापा (क), तिलक राना, तिलक गोतामे, पूर्ण थापा, केशर बोगटी, गिरु थापा, नेत्र कँडेल र खुम बहादुर गोदार रहनु भएको छ । वैकल्पिक सदस्यमा हुम बहादुर थापा, भिम बगाले, गोपाल थापा (ख) र धुर्व अर्याल रहनु भएको छ । सम्मेलनले चन्द्र खनाल, देवीराम राहाडी, देव बहादुर कँुवर र लाल बहादुर गाहालाई सल्लाहकार चयन गरेको छ । समितिको घोषणा केन्द्रीय सदस्य गोविन्द बहादुर थापाले गर्नु भएको थियो ।
केन्द्रीय सचिव इन्द्र भेटाल, केन्द्रीय सदस्य तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष खुम बहादुर पुन, क्षेत्रीय समितिका मोहन ठकुल्ला, अनन्त राहाडी, रक्तिम केन्द्रीय विभागका बोम बहादुर सिंजापति, महिला क्षेत्रीय संयोजक रेणुका कँुवर, रक्तिम परिवारकी उषा थापा, अलिबागका मधु पुन, तारापुरका ज्ञान प्रसाद भट्टराई, प्रवासी नेपाली सङ्घका ठानेश्वर भट्टराई लगायतले बधाइ दिनु भएको थियो । घोषणा सभाको अध्यक्षता लिलाम्बर सिंजाली र सञ्चालन केशव गाहाले गर्नु भएको थियो । रण बहादुर वोगटी र रक्तिमका कलाकारहरुले स्वागत गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।
दक्षिण भारत क्षेत्रीय समिति अन्तर्गत कोट्याम नगर समितिको ऐतिहासिक दशौँ नगर सम्मेलन जुन ९–१० का दिन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन प्रमुख अतिथि मूल प्रवाहका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र बस्यालले तालीको करतलमा मैनबत्ती जलाएर गर्नु भएको थियो ।
धर्मराज शर्माको अध्यक्षता तथा मनोज जिसीको सञ्चालनबाट अगाडि बढेको सो सम्मेलनमा सङ्गीतबाट रक्तिम र शब्दबाट नारायण शर्माले स्वागत गर्नु भएको थियो । केन्द्रीय सल्लाहकार चोभनाथ शर्मा, क्षेत्रीय सदस्य तुलवीर थापा र क्षेत्रीय प्रतिनिधि डम्मर थापाले शुभकामना दिनु भएको थियो ।
सम्मेलनले धर्मराज शर्माको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय नगर समिति चयन गरेको छ । समितिमा उपाध्यक्ष शेर बहादुर विक, सचिव मनोज जिसी, सहसचिव डिल बहादुर राना र कोषाध्यक्ष टिकाराम सुवेदी रहनु भएको छ । त्यस्तै, सदस्यहरुमा राजेन्द्र थापा, कृष्ण प्रसाद शर्मा, एकराज पौडेल, प्रेम शर्मा, धन कुमारी केसी, राम बहादुर खत्री, हरि प्रसाद पौडेल, खुमादेवी शर्मा, बालिका देवी शर्मा, लालचन्द्र शर्मा, गणेश शर्मा र जङ्ग बहादुर थापा रहनु भएको छ । वैकल्पिक सदस्यमा श्याम बस्याल, लक्ष्मी पौडेल, चन्द्र प्रसाद शर्मा र तेज बहादुर सिंह रहनु भएको छ । सम्मेलनले भद्र बहादुर थापा, नारायण शर्मा, भवानी पाण्डे, विष्णु सुवेदी र कौशिला थापालाई सल्लाहकारमा चयन गरेको छ । समितिको घोषणा प्रमुख अतिथि बस्यालले गर्नु भएको थियो ।
चोभनाथ शर्मा, क्षेत्रीय समितिका सदस्य तुल बहादुर थापा र बाबुराम रेग्मी, क्षेत्रीय प्रतिनिधि डम्मर थापा, त्रिभेन्ड्रमका चम्पा रेग्मी र कोचिनका जनक बिसी लगायतले बधाइ दिनु भएको थियो । घोषणा सभाको अध्यक्षता भद्र बहादुर थापा र सञ्चालन टिकाराम सुबेदीले गर्नु भएको थियो । रक्तिमका कलाकार र विष्णु सुवेदीले स्वागत गर्नु भएको थियो । भीम प्रसाद आचार्यले धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भएको थियो । साँझपख रक्तिमका कलाकारहरुले लोकप्रिय नौमति बाजाका साथै गीत र नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।
जुन २–३ का दिन मध्य पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय समिति अन्तर्गत रिवाडी, नारनौल र निमरानाको संयुक्त नगर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । नारनौल नगर समितिको नवौँ तथा रिवाडी र निमराना नगर समितिको छैटौँ सम्मेलन रेवाडीमा सम्पन्न भएको हो ।
झमन सिंह थापाको सञ्चालन, रिवाडीका राम बहादुर खड्काको अध्यक्षता र निमरानाका देवराज पुनको स्वागत मन्तव्यबाट अगाडि बढेको सो सम्मेलनमा केन्द्रीय सदस्य मोतीराज गौतमको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । सम्मेलनबाट निर्वाचित तीन वटै नगर समितिको घोषणा केन्द्रीय सदस्य नारायण शर्माले गर्नु भएको थियो ।
सम्मेलनले राम बहादुर खड्काको अध्यक्षतामा रिवाडी नगर समिति गठन गरेको छ, जसको उपाध्यक्षमा विष्णु भण्डारी, सचिवमा ज्ञान प्रसाद शर्मा, सहसचिवमा रिता केसी र कोषाध्यक्षमा जोग बहादुर आले रहनु भएको छ । सदस्यहरुमा तेजवीर घर्ती, देवेन्द्र केसी, बिरु पुन र शान्ति घिमिरे रहनु भएको छ । वैकल्पिक सदस्यहरुमा रूपेश रोका र ओबिराम जिएम रहनु भएको छ । सम्मेलनले जसवन्त सिंह, गीता भन्डारी, शेरु थापा र तोयरामलाई सल्लाहकार चयन गरेको छ ।
त्यस्तै, नारनौल नगर समितिमा अध्यक्ष कौशल सोनी रहनु भएको छ भने उपाध्यक्षमा दल बहादुर सोनी, सचिवमा झम्मन सिंह थापा, उपसचिवमा बाबुराम र कोषाध्यक्षमा रवि थापा रहनु भएको छ । सदस्यहरुमा ईश्वरी पाण्डेय, भुवन थापा, विष्णु शर्मा पौडेल र पार्वती आचार्य रहनु भएको छ । वैकल्पिक सदस्यमा नर बहादुर चौहान र चन्द्र बहादुर गाहा रहनु भएको छ । सम्मेलनले प्रेम रमजाली, भगयान सिंह थापा, राजु शर्मा र सीमा सोनीलाई सलाहकारमा चयन गरेको छ ।
एवं प्रकारले निमराना नगर समिति देवराज पुनको अध्यक्षतामा गठन गरिएको छ । समितिको उपाध्यक्षमा हुमलाल भण्डारी, सचिवमा चेतमान पुन, सहसचिवमा गोविन्द घर्ती र कोषाध्यक्षमा चित्र बहादुर घर्ती रहनु भएको छ । सदस्यहरुमा पूर्ण भण्डारी, रोम बहादुर पुन, चित्रमान पुन, खेमराज पुन र शोभराम घर्ती रहनु भएको छ । वैकल्पिक सदस्यमा तारा भण्डारी र चन्द्र बहादुर घर्ती रहनु भएको छ । सल्लाहकारहरुमा मान बहादुर सुनार र पूर्ण बहादुर घर्तीलाई चयन गरेको छ ।
केन्द्रीय समितिका बाबुराम बस्नेत, क्षेत्रीय सदस्य राम प्रसाद घिमिरे, वशन्त श्रेष्ठ, रक्तिम केन्द्रीय विभागबाट रिम राना, अखिल भारत नेपाली विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिकी कृष्टि राई, क्षेत्रीय महिला विभागकी तिला केसी, जयपुर उत्तर नगर समितिका उपाध्यक्ष मङ्गल सिंह खड्का, जयपुर दक्षिण नगर समितिका सचिव बाबुराम थापा, भिवाडी नगर समितका काजीराम श्रेष्ठले तीन वटै नगर समितिलाई बधाइ दिनु भएको थियो ।
सम्मेलनको उद्घाटन केन्द्रीय सदस्य मोतीराज गौतमले गर्नु भएको थियो । ज्ञान प्रसाद शर्माको सञ्चालन र ईश्वरी आचार्यको अध्यक्षतामा अगाडि बढेको सो सम्मेलनलाई केन्द्रीय सदस्य नारायण शर्माले शुभकामना दिनु भएको थियो । सम्मेलनमा रक्तिम सांस्कृतिक परिवार मध्य–पश्चिमोत्तर क्षेत्रीय विभागले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए
एल्लुरू–आन्ध्र प्रदेश ः
जुन ७–८ का दिन मध्य दक्षिण क्षेत्रीय समिति अन्तर्गत एल्लुरू नगर समितिको तेस्रो सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनमा मूल प्रवाहका केन्द्रीय वैकल्पिक सदस्य तथा क्षेत्रीय सचिव खिम बहादुर बिकको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि मूल प्रवाहका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा क्षेत्रीय सचिवालय सदस्य राम कुमार क्षेत्री, क्षेत्रीय समितिका राम प्रसाद पौडेल क, नरेन्द्र पुन, रक्तिमबाट झलक पुन, रिता शर्मा, कृष्ण कुमारी विक, भिम बहादुर थापा, वीर बहादुर विक, लक्ष्मी जिसी, ज्येष्ठ नागरिक मीन बहादुर जिसीले शुभकामना दिनु भएको थियो । राज कुमार रायमाझीको अध्यक्षता, शिवराज पौडेलको सञ्चालन, राम प्रसाद पौडेल ख र रक्तिम विभागका क्षेत्रीय समितिका कलाकारहरुले स्वागत गर्नु भएको थियो ।
नयाँ समितिको घोषणा क्षेत्रीय सहसचिव भीम बहादुर थापाले गर्नु भएको थियो । समितिको अध्यक्षमा राज कुमार रायमाझी, उपाध्यक्षमा लक्ष्मी जिसी, सचिवमा शिवराज पौडेल, सहसचिवमा पृतम पुन र कोषाध्यक्षमा कमला भट्टराई रहनु भएको छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा दुर्गा प्रसाद आचार्य, खिमकला गाहा, राम प्रसाद पौडेल, बिप बहादुर कँुवर, बम बहादुर खड्का र चिरञ्जीवी श्रेष्ठ रहनु भएको छ । वैकल्पिक सदस्यहरुमा तुक शर्मा आचार्य, जित बहादुर बुढाथोकी, शङ्कर खड्का, मीना पौडेल, अमृता लम्तेरी र मीना आचार्य रहनु भएको छ । सम्मेलनले सल्लाहकारमा प्रबिन कार्की, पद्मा पुन, ज्ञानेन्द्र पुन, बिन्दु आले मगर र कृष्ण बहादुर कार्कीलाई चयन गरेको छ । कार्यक्रममा रक्तिमका कलाकारहरुले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
जुन ४ का दिन मध्य दक्षिण क्षेत्रीय समिति अन्तर्गत वर्धा नगर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनको उदघाटन क्षेत्रीय सहसचिव भिम बहादुर थापाले गर्नु भएको थियो ।
सम्मेलनलाई शेर बहादुर खड्का, वर्धा नगर समितिका संस्थापन अध्यक्ष बलराम विष्ट, महिला नगर विभागबाट उमा विस्टले शुभकामना दिनु भएको थियो । कार्यक्रम तुकमान पुरीको अध्यक्षता तथा विजय विष्टको सञ्चालन र तिलक राम नेपालीले स्वागतका साथ अघि बढेको थियो ।
सम्मेलनले शेर बहादुर खड्काको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय नगर समिति चयन गरेको छ, जसमा उपाध्यक्ष बस्तराम विष्ट, सचिव विजय विष्ट, सहसचिव महेन्द्र ठाकुर र कोषाध्यक्ष तिलकराम नेपाली रहेका छन् । सदस्यहरुमा तुकमान पुरी, कृष्ण विक, कविता क“डेल र आई.बी. थापा रहनु भएको छ । वैकल्पिक सदस्यमा उमा विष्ट, लक्ष्मी खडका र कमला नेपाली रहनु भएको छ । सम्मेलनले सल्लाहकारमा नर्मा पुरी र रुपा विकलाई चयन गरेको छ ।
दक्षिण भारत क्षेत्रीय समिति अन्तर्गत इरोड नगर समितिको नवौँ सम्मेलन अप्रैल ९ का दिन सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय सदस्य हरि बहादुर खत्री र राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालय भवनका व्यवस्थापक के.बी. थापाको आतिथ्यतामा सो सम्मेलन सम्पन्न भएको हो ।
सम्मेलनलाई क्षेत्रीय सदस्य खिमानन्द उपाध्यायले पनि शुभकामना दिनुभएको थियो । उद्घाटन समारोहको सञ्चालन सावित्री ढकाल र अध्यक्षता भिमलाल शर्माले गर्नु भएको थियोे ।
सम्मेलनले भवानी प्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा नया“ समिति निर्वाचित गरेको छ, जसमा उपाध्यक्ष भिमलाल शर्मा, सचिव डम्बर बहादुर जिसी, सहसचिव खेमनाथ शर्मा र कोषााध्यक्ष खिमानन्द उपाध्याय रहनु भएको छ । सदस्यहरुमा सावित्री ढकाल, भूमिश्वर ढकाल, सुरेश थापा र गङ्गादेवी रहनु भएको छ । वैकल्पिक सदस्यहरुमा देवी कुमारी लामिछाने, सुदा शर्मा र रुकमान शर्मा रहनु भएको छ । सम्मेलनले इन्द्र प्रसाद शर्मा, दुर्गा देवी र नवराज शर्मालाई सल्लाहकारमा चयन गरेको छ । समितिको घोषणा हरि बहादुर खत्रीले गर्नु भएको थियो ।
समितिलाई अखिल नेपाल महिला सङ्घ कास्कीकी उपाध्यक्ष जमुना खत्री, क्षेत्रीय सदस्य बिरे थापा, विद्यार्थी सङ्घकी क्षेत्रीय समितिकी कुमारी थापा, सांस्कृतिक विभागका वल बहादुर विक, केन्द्रीय पार्षद रविशङ्कर शर्मा, निलगिरीका जगत हमाल र कोयम्बटुरका गोपाल शर्माले वधाइ दिनु भएको थियो ।
घोषणा सभाको अध्यक्षता खेमनाथ शर्माले र सञ्चालन डम्बर बहादुर जिसिले गर्नु भएको थियो । भवानी प्रसाद लामिछाने र रक्तिमका कलाकारहरुले स्वागत गर्नु भएको थियो । सम्मेलनमा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो ।